software kuyedza uye akasiyana marudzi ekufunga
Kuru Qa Software Kuedzwa uye Akasiyana Kufunga Mhando
Kana zvasvika pakuedzwa kweSoftware, huropi hwemunhu ndicho chishandiso chakanakisa chekuyedza. Kana isu tichiedza software, isu tinogadzira ruzivo, kugadzirisa matambudziko, kuita sarudzo uye kugadzira mazano matsva.
Sevanoedza, isu tinofanirwa kuziva nezvenzira dzakasiyana dzekufunga kuti tikwanise kuzviyananisa nemamiriro akasiyana. Semuenzaniso, patinotarisa dhizaini dhizaini, tinofanirwa kuongorora. Kana isu tichifunga nezvezviitiko, isu tinofanirwa kufunga nenzira isinganzwisisike.
Mabasa akasiyana ekuyedza anoda akasiyana maitiro ekufunga. Nechikonzero ichi, zvakakosha kuti ukwanise 'kushandura' nzira dzakasiyana dzekufunga pachiitiko chega chega.
Mhando dzekufunga mune izvo Context yeSoftware Kuyedza
Ngationgororei mhando dzakasiyana dzekufunga uye kuti imwe neimwe ingashandiswe sei muchiitiko cheSoftware Kuyedza uye akasiyana mabasa ekuyedza.
Kugadzira kana Kwapashure Kufunga
Kugadzira kufunga kunoreva kutarisa chimwe chinhu nenzira nyowani. Ndiyo tsananguro chaiyo ye 'kufunga kunze kwebhokisi.'
Mukufunga kwekusika, isu tinotsauka kubva kune yakasimbiswa dzidziso, mitemo uye maitiro uye toita zvinhu nenzira nyowani uye yekufungidzira nzira.
Muchirevo chekuyedza, semuenzaniso, izvi zvinogona kuve patinoshandisa nzira nyowani dzekuyedza, i.e. pfumo rekuyera nzira yekuyedza kudzikisira huwandu hwezvibvumirano asi uchiwedzera kufukidzwa.
Ongororo yekufunga inoreva kugona kupatsanura yakazara muzvikamu zvayo zvakakosha kuti uone zvikamu nehukama hwayo. Zvinosanganisira kufunga zvine musoro, nhanho-nhanho nzira yekupaza yakakura system yeruzivo muzvikamu zvayo.
Semuenzaniso patinotarisa dhizaini dhizaini uye kuyedza kufunga nzira kuburikidza nesystem uye yega zvinhu.
Muenzaniso wakanaka ndipo patinoongorora zvinoitika kana mushandisi akaendesa fomu uye chikumbiro chinotumirwa kune API iyo inotaurirana neDhatabhesi.
Kufunga kwakakomba ndiko kugona kufunga nekunyatsoongorora chimwe chinhu kuti uone kushanda kwayo kana kurongeka. Izvo ndezve kuve unoshingairira kudzidza pane kungoitawo zvake wekugamuchira ruzivo.
Kufunga kwakakomba ingangodaro ndiyo yakakosha mhando yekufunga mune yekuyedza. Sevanoedza, isu tinofanirwa kugara tichibvunza mazano uye zvekufungidzira pane kuzvigamuchira nemutengo chaiwo.
Semuenzaniso, kana tichitarisa nyaya yemushandisi, tingave tiri kubvunza mibvunzo nezve iyo kubvuma maitiro pachinzvimbo chekuvatambira sezvavanopihwa kwatiri.
Konkrete kufunga kunoreva kugona kunzwisisa nekushandisa ruzivo rwechokwadi. Izvo zvinopesana nekufunga kusinganzwisisike.
Vanhu vanofunga zvine mutsindo vanofarira kuteedzera mirairo uye vane zvakadzama zvirongwa. Ivo vanovenga chero chinhu chisina kujeka kana chisina kujeka. Sezvo vakadaro vatendi vekongiri vanosarudza kushanda nemazita uye maspredishiti.
Muchirevo chekuyedza, apa ndipo apo testers inodaira kuti mirairo yese ivepo isati yatanga kuyedza. Muenzaniso vamwe vanoedza havazotanga kuyedza kudzamara nzira dzese dzekubvuma dzatsanangurwa munyaya yemushandisi.
Kupesana nekufungisisa kwekongiri, kufunga kwekufungidzira zvinoreva kugona kwekufunga nezve zvinhu zvisipo chaizvo.
Software testers vanofunga nenzira isingafungidzike vanotarisa kukosha kwakakura kwemazano neruzivo kwete pane izvo zvekongiri.
Semuenzaniso muchirevo chekuyedza uye zvikamu zvekushambadzira nyaya, vaedzo vane kugona kufunga nenzira isinganzwisisike vanogona kuuya nezviitiko zvinonakidza zveyedzo. Panzvimbo pekungoverenga nzira yekutambira, vanoedza vachatarisa nyaya yemushandisi uye voedza kuona kuti izvi zvingabatana sei kana kukanganisa zvimwe zvikamu zvegadziriro.
Kufungidzira Kufunga kunoreva kugona kuburitsa mazano ekugadzira nekutsvaga mhinduro zhinji dzingaitwe mukuedza kuwana imwe inoshanda. Zvinosanganisira kuunza chokwadi uye dhata pamwechete kubva kwakasiyana masosi uyezve kushandisa pfungwa uye ruzivo kuita sarudzo.
Kana tichiedza kuongorora, tinoshandisa mashura uye heuristics uye tonga nekutarisa pane zvatakasangana nazvo kare.
Kufunga kwakachinjika kugona kuisa zvidimbu zvakasiyana kana maonero ehurukuro pamwechete mune imwe nzira yakarongeka, zvine musoro kuti uwane mhinduro imwe chete.
Semuenzaniso, patinoedza kutsvaga chinokonzera kukanganisa, tinounganidza ruzivo rwakakodzera uye tinotora data rakakodzera.
Sequential (mutsara) kufunga kunoreva kugona kugadzirisa ruzivo nenzira yakarongeka. Inosanganisira nhanho-nhanho kufambira mberi uko mhinduro kune imwe nhanho inofanirwa kuwanikwa isati yatorwa imwe nhanho.
Muchirevo chekuyedzwa kwesoftware, izvi zvinoenderana neapo isu patinotevera script ine matanho akafanotaurwa uye mhedzisiro inotarisirwa.
Holistic (isina mutsetse) kufunga ndiko kugona kuona iyo hombe pikicha uye nekuziva kuti izvo zvikamu zvinoumba iyo hombe system. Izvo zvinosanganisira kuwedzera kwako kufunga maitiro munzira dzakawanda, pane kungori munzira imwechete.
Muchirevo chekuyedza, apa ndipo patinoita kuyananisa kana kuyedza system.
Software kuyedzwa kunoda kufunga kwakadzama. Iyo nzira yekugara uchibvunza mibvunzo uye kuongorora ruzivo rwatinogashira. Zviitiko zvakasiyana zvekuyedza zvinoda maitiro akasiyana ekufunga. Kunzwisisa mhando dzakasiyana dzekufunga kunobatsira mukubvunza mibvunzo kwayo.
Pakubvunzurudza vaedzo, isu tinofanirwa kunge tichivhunza mamiriro akavakirwa mibvunzo iyo inoshandisa kugona kwemuyedzo maererano nemhando dzekufunga dziri pamusoro.
Yakanakisa Cyber ​​Muvhuro iPhone madhiri
AT & T inopa BOGO dhizaini pane iPhone 7 kana yemahara iPad kana iwe uchinjira kuDirecTV
AT & T Yakabhadharwa uye Cricket Nhema Chishanu madhiri anosanganisira Galaxy S9 pahafu, $ 99 iPhone 6s
Kwokutenga iyo Pixel 4a: madhiri nemitengo kuGoogle Store, Best Buy uye Verizon
Android 4.2.2 yekuvandudza yeAT & T & apos; s HTC One X parizvino yave kusundidzirwa kunze
Kuvanzika, Kuvimbika uye Kuwanika